International Hotel Projects - Armati Hotel Project Ileba Study1 - Ọwụwa Kempinski Hotel Beijing
Armati Hotel Project Ileba Study1 - Ọwụwa Kempinski Hotel Beijing
Otu n'ime Armati 5 amalite hotel oru ngo na Beijing, China,-nnọọ ka gaa na nke a hotel ịhụ anyị foset.
Armati foset catalouge biko na-esonụ:
Kempinski ụtọ ka ị na-Yanqi Lake, a ọhụrụ n'ọnu-miri nke obi iru ala na ịma mma, na ebube echiche nke Yanshan Mountain na Mutianyu Great Wall, dị nnọọ otu awa mbanye si Beijing City Centre. Ọwụwa Kempinski awade ọbịa na ndị ezinụlọ ha na-akpali akpali na ahụmahụ na a ọhụrụ n'ụzọ zuru ezu-ike resotu ke ná mpụga Beijing. Ụlọ ọrụ na-agụnye 306 ime ụlọ ndị ọbịa na oke ime ụlọ, anọ amụ ihe, Kempsinki The Spa, ntụrụndụ na mma ụlọ ọrụ, a eyen si Club na n'usoro nke culinary àjà n'oge ya a itoolu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nkpọrọ.
E site Shanghai Huadu Architect Design Co., Ọwụwa Kempinski Hotel, Beijing dunyere udi nke ọwụwa anyanwụ na-anọchi anya kwekọrọ, ịdị n'otu na-enweghị nsọtụ. Si a n'akụkụ n'akuku echiche, na họtel ụlọ mma ahụ yiri skalọp nke na-anọchi anya 'Fortune' na Chinese omenala. The n'ihu n'uche bụ na nke 'ọwụwa anyanwụ' - Atụ nke fast--emepe emepe aku na uba nke China.
Okomoko fiver mmalite hotel ụlọ ịwụ oru ngo Kempinski